Gudoomiyaha Gudida iskuulka 26ka Juun ee Ardaydii wax ka baratay 1980 – 1988kii oo warbixin naga siiyey hawshii u qabsoontay ee uu iskuulka ku soo dayactiray | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Gudoomiyaha Gudida iskuulka 26ka Juun ee Ardaydii wax ka baratay 1980 – 1988kii oo warbixin naga siiyey hawshii u qabsoontay ee uu iskuulka ku soo dayactiray
Published on April 12, 2017 by sdwo · No Comments
Dugsiga Sare 26 jun Hargaysa. Gudoomiyaha Ardayda 26ka juun Cabdi wahaab xaaji xasan iyo gudida ardaydu waxay sameeyeeyn dib u soo ururinta ardayda juun oo cabdiwahaab hormood ka yahay wayna ku guuleesteen isaga iyo gudida iskuulkii 26ka juun wayna ku mahadsan yihiin hawshaa ay qabteen oon ka dhicin somaliland iyo somaliya toona.
Waa waxa ku cusub gayiga somalida oo dhan waayo waxa ay sameeyeen gole isku keebay arday kala baaday muddo dheer ka soo biloow 1980-1988 waa wax lagu farxo .
Gudida iskuulka 26ka juun waxay sameeyeen .
1- Xafalad Ardaydii juun iyo macalimiintii wakhtigaas 2-Ardayay kala maqneed 35 sano oo is arkay 3- Dhaqale ururin iskuulkii lagu caawiyo. 4- iskuulkii oo dib loo dhiso Waxaa sharftaa mudan Gudoomiye Cabdiwahaab iyo gudidii golaha ardayda juun. Oo xusid mudan Well done gudida iskuulka 26ka juun.
Gudoomiye Cabdiwahab Xaaji Xasan oo Shahaado la gudoonsiiyey
Wasiir ku xigeenka waxbarashada ayaa gebogebadii mashruuxii dibuhabaynta iskuulka shaahado sharaf ku gudoonsiiyey gudoomiyaha gudida iskuulka 26ka June Cabdi Wahab Xaaji Xasan. Waxa goobtaas hadalo ka jeediyey, maamulaha dugusiga 26ka June, gudoomiyaha ururka ardaydii 26ka Juun xiligaasi hore. wasiirka kuxigeenka wasaarada wax barashadam, Waxa kale oo ka hadlay latiyaha wasiirka waxbarashada. waxyaabaha ugu weyn ee ay hirgeliyeen waxa ka mid ah iyagoo 9 fasal dhulka marmar dhamaystiran dhigay, laba fasal oo daroorimaynayeyna roofkii laga qaaday oo la hagaajiyey.
Halkan hoose ka daawo xafladii ugu horeysay ee uu Cabdiwahab soo abaabulay oo uu iskugu keenay magalada London ardaydii iyo macalimiintii dugsigaas ka soo aflaxday 80kii oo ka kala yimid dalal badan oo Yurub ah, taasi oo suurtogelisay in la ururiyo qaadhaankii balaadhnaa ee hore ee march bilowgeedii dibu habaynta loogu sameeyay dusigii 26ka Juun.
Sawirkan waa kulankii oo ardaydii hore ee ka dhacay London ee uu soo qabanqaabiyey Cabdiwahab Xaaji Xasan